Akụkọ ngalaba mmekọ | Martech Zone |
Isiokwu na Martech Zone site n'aka ndị mmekọ m maka ịnye ngwaahịa, ngwọta na ọrụ teknụzụ ahịa na ịzụ ahịa.
Whatagraph: Multi-Channel, Real-Time Data Monitoring & Reports For Agency & Teams
Ọ bụ ezie na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ahịa ọ bụla na usoro martech nwere mgbasa ozi, ọtụtụ ndị siri ike, ha na-adaba ịnye ụdị echiche zuru oke banyere ahịa dijitalụ gị. Dị ka marketers, anyị na-eme na-agbalị centralize akuko na Analytics, ma ọ bụ ezie na ọ bụ nanị nanị na-eme ihe na gị na saịtị kama niile nke dị iche iche ọwa ị na-arụ ọrụ na. Na… ma ọ bụrụ na ị na mgbe nwere obi ụtọ na-agbalị iwulite a. akuko na ikpo okwu,
Ntuziaka dị mfe iji dọta ndị ndu dijitalụ mbụ gị
Fraịdee, June 3, 2022 Fraịdee, June 3, 2022 Aleksandra Korczynska
Ịre ahịa ọdịnaya, mkpọsa ozi-e na-akpaghị aka, na mgbasa ozi akwụ ụgwọ-enwere ọtụtụ ụzọ isi kwalite ahịa na azụmahịa n'ịntanetị. Otú ọ dị, ezigbo ajụjụ bụ banyere mmalite nke iji ahịa dijitalụ. Kedu ihe mbụ ị ga-eme iji mepụta ndị ahịa na-emekọrịta ihe (ndị ndu) n'ịntanetị? N'isiokwu a, ị ga-amụta ihe kpọmkwem ndu bụ, otu ị nwere ike isi mee ngwa ngwa n'ịntanetị, yana ihe kpatara ọgbọ ndu organic ji achị mgbasa ozi akwụ ụgwọ. Gịnị bụ
Nzọụkwụ 10 iji mepụta nyocha ọnlaịnụ dị mma yana itinye aka
Wednesday, June 1, 2022 Wednesday, June 1, 2022 Douglas Karr
Ngwa nyocha n'ịntanetị dị oke egwu maka ịnakọta na nyocha data nke ọma na nke ọma. Nnyocha ntanetị jikọtara nke ọma na-enye gị ozi nwere ike ime, nke doro anya maka mkpebi azụmahịa gị. Iwepụta oge dị mkpa n'ihu na ịmepụta nnukwu nyocha n'ịntanetị ga-enyere gị aka nweta nzaghachi nzaghachi dị elu, yana data dị elu dị elu ma ọ ga-adịrị ndị na-aza ajụjụ gị mfe imecha. Nke a bụ usoro 10 iji nyere gị aka ịmepụta nyocha dị irè, mụbaa ọnụego nzaghachi nke gị